လာ…တူတူဆွဲကြမယ်..ဟေ့…ခေါက်ဆွဲ (အပိုင်း-၁) ~ သဘာဝရဲ့အာဟာရ
Monday, July 21, 2014 Taunzalat
ခေါက်ဆွဲဆိုတာဘာလဲ? အလွယ်ဖြေရရင်တော့ ခေါက်ဆွဲဆိုတာ ဂျုံမှုန့် ကို ရေဆူဆူမြှာ ပုတ် ထားတဲ့ ဂျုံဖတ်ပါဘဲ။ အဲဒီဂျုံဖတ်ကို လိမ်၍သော်လည်းကောင်း၊ နှစ်ခုပူး၍သော် လည်းေ ကာင်း၊ မွှေ၍သော်လည်းကောင်း၊ ဘရပ်ရ်ှနှင့်တိုက်၍သော်လည်းကောင်း၊ လက်ဖြင့်ပွတ်၍သော် လည်းေ ကာင်း၊ ဖိ၍သော်လည်းကောင်း၊ လှည့်၍သော်လည်းကောင်း၊ ညှစ်ချ၍သော်လည်းေ ကာင်း၊ ဆွဲ၍ သော်လည်းကောင်း စသည်ဖြင့် စားဖွယ်စုံအတွက် ခေါက်ဆွဲဖတ်ကို ပုံသဏ္ဌာန် အမျိုး မျိုး ပြုလုပ်ကြခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ ယေဘုယျ အားဖြင့် ခေါက်ဆွဲကို အကြော်၊ အသုပ်၊ ခေါက် ဆွဲပူ /ခေါက်ဆွဲအေးစွပ်ပြုတ် ဟူပြီး စားလေ့ရှိကြပါတယ်။
ခေါက်ဆွဲရာဇ၀င် အစကဘယ်ကလဲ? ဆိုတာနဲ့ ပတ်သက်ပြီး၊ အငြင်းပွားမှုကလေးတွေရှိခဲ့ကြ ပါတယ်။ အချို့ က ခေါက်ဆွဲ အစ မြေထဲပင်လယ်တိုင်းပြည်ကလို့ ဆိုကြသလို၊ အချို့ ကလဲ ခေါက် ဆွဲအစ အရှေ့ အလယ်ပိုင်းဒေသ “အာရပ်” က လို့ ဆိုကြပြန်ပါ တယ်။ ဒီအငြင်းပွားမှုတွေ အတွက်၊ နိုင်ငံကတာ ရှေးဟောင်းယဉ်ကျေးမှုလေ့လာရေးသုတေသီများက သမိုင်းရာဇ၀င်များကို အကျိတ်အနယ် ပြန်လည်တူးဆွကြတာပေါ့။ နောက်ဆုံးမှာတော့ ဘေဂျင်း ရှိ The Chinese Academy of Sciences မှ ရှေးဟောင်းယဉ်ကျေးမှုသုတေသနအဖွဲ့ ခေါင်းဆောင် Houyuan Lu ဆိုသူက Han မင်းဆက်မှစ၍ Qing မင်းဆက်အထိ ခေါက်ဆွဲပြုလုပ် စားသုံးခဲ့ပုံ အဆင့်ဆင့် ကို တရုပ်ပြည်သမိုင်းကြောင်း အထောက်အထားများ နဲ့အခိုင်အမာ အတည်ပြု လိုက်မှသာ၊ အငြင်းပွားမှုများ တခန်းရပ်သွားခဲ့ပါ တယ်။ ယနေ့ ကမ္ဘာမှာတော့ ခေါက်ဆွဲ ဆိုတာ တူချောင်းေ လး ၂ ချောင်းဖြင့် ထိုးဆွစားရသော တရုပ်အစားအစာ တစ်ခုဖြစ်ကြောင်းကို စိုးစဉ်းမျှယုံမှား သံသယဖြစ်ဖွယ် မရှိတော့ပါဘူး။
ခေါက်ဆွဲအစ..ဘယ်ဒေသက.. လို့ မည်သို့ ပင်အငြင်းပွားခဲ့စေကာမူ၊ ခေါက်ဆွဲစားသုံးသော ယဉ်ကျေးမှု ထွန်းကားလာသည့် အလျောက်၊ ပစ္စုပ္ပန်ကာလမှာတော့ အာရှ/ဥရောပတိုက်အားလုံး တွင် ခေါက်ဆွဲ က အဓိကအစားအစာအဖြစ် နေရာယူလျှက် ရှိနေပါပြီ။ နေရာဒေသယဉ်ကျေး မှုပေါ်လိုက်၍ ဂျုံ/လူး/ဆပ်/ဆန်/ပြောင်း/ကြက်ဥ တို့ ကို အခြေခံကာ ခေါက်ဆွဲ အဖြစ် ဖန် တီး/ ပြင်ဆင်/ ခေါ်ဝေါ်ပုံချင်း မတူညီကြခြင်းသာ ဖြစ်ပါတယ်။
< တရုပ်ခေါက်ဆွဲ >
ရှေးလွန်ခဲ့သော နှစ်ပေါင်း ၄၀၀၀ ကျော်ကတည်းကစပြီး၊ မြစ်ဝါမြစ်တည်ရှိ ရာ၊တရုပ်ပြည်မြောက် ပိုင်းဒေသတွင် လူးစပါးပင် မှ ခေါက်ဆွဲလုပ်ခဲ့ကြလေ၏။ ခေတ်ကာလရွေ့ လျားလာပြီးနောက် AD ၁၀၀ ခန့် မှစ၍ ဂျုံဖြင့် ပြောင်းလဲလုပ်ခဲ့ကြသော်လဲ၊ ယနေ့ချိန် ထိ တရုပ်ပြည်မြော က်ပိုင်း တွင် ခေါက်ဆွဲလုပ်ရန် ကုန်ကြမ်းအဖြစ် လူးစပါးများကို တွင်တွင်ကျယ်စိုက်ပျိုးလျှက် ရှိနေကြတုန်း ပါ။ တရုပ်ပြည်တွင် ခေါက်ဆွဲဆိုင်များကို ဖွင့်လှစ်လာကြတာ Sung မင်းဆက်မှစ၍ ယနေ့ ထက် တိုင်အောင်ပါဘဲ။ တရုပ်ရိုးရာ အရ ခေါက်ဆွဲ သည် “အသက်ရှည်သည်” သက်ဝင်ယုံကြည်ကြ တဲ့အတွက် မွေးနေ့ ပွဲနှင့် နှစ်ကူးပွဲများတွင် မဖြစ်မနေစားကြပါ တယ်။ တရုပ်ပြည်ရဲ့birthday cake ဟာ birthday noodles ပါဘဲတဲ့။
(၁)La Mian ခေါက်ဆွဲ။ တရုပ်လို La = ဆွဲဆန့်Mian = ခေါက်ဆွဲ ဟု အဓိပ္ပါယ်ရသော La Mian ခေါက်ဆွဲ ကတော့ ရှေးရိုးရာ လက်ဖြင့်လုပ်တဲ့ခေါက်ဆွဲဖြစ်ပါတယ်။ သူတို့ ဆီမှာတော့ “လက်ဆွဲခေါက်ဆွဲ” လို့ ခေါ်ဝေါ်ကြပါတယ်တဲ့။ ဂျုံမှုန့် နှစ်အရည် ပျစ်ပျစ်စပ်ထားပြီး၊ လက်ဖြင့် လိမ်ပြီးတော့ ဆွဲဆန့် ကာ၊ အမျှင်သေးသေးရှည်ရှည်ပြုလုပ်ထားတဲ့ လက်လုပ်ခေါက်ဆွဲလေးပါ။ ဒီ အဖြူရောင် ခေါက်ဆွဲကို ခေါက်ဆွဲပြုတ် ၊ ခေါက်ဆွဲကြော်အဖြစ်အသုံးပြုလေ့ရှိပါတယ်။ တရုပ်ပြည်မှာသာမက၊ အမေရိကန်မှာလဲ လူကြိုက်များတဲ့ ခေါက်ဆွဲအမျိုးအစားဖြစ်ပါတယ်။
(၂)Mee Pok ခေါက်ဆွဲ။ ဂျုံ နဲ့ လုပ်ထားတဲ့ ၀ါဖျော့ဖျောရောင့် ခပ်ြပားပြား ခေါက်ဆွဲလေးပါ။ ဒီခေါက်ဆွဲကိုတော့ အသားပြုတ်ရည် ဖြင့် ခေါက်ဆွဲပြုတ်လေ့ရှိကြပြီး မှို၊ နှင့်အသားတို့ကို နုပ်နု ပ်စင်းစင်းကာ အပေါ်မှဖြူးကာ၊ အချဉ်ရည်တို့ ၍ စားသုံးကြပါတယ်။ ငါးဆုပ်လုံး ခေါက် ဆွဲပြုတ် အဖြစ်လဲ စားကြပါတယ်။ စင်္ကာပူ၊ ထိုင်း နှင့် မလေးရှားတို့ တွင်တော့ “bak chor mee” လို့ခေါ်ကြ ပါတယ်။
(၃)He Fen ခေါက်ဆွဲ။ ဆန်ဖြင့်လုပ်ထားတဲ့အဖြူရောင် ခေါက်ဆွဲပြားဖြစ်ပါတယ်။ အမဲသာြး ဖင့် ကြော်စားလေ့ရှိကြပြီး၊ “chao fen” ခေါက်ဆွဲကြော်လို့ ခေါ်ကြပါတယ်။
(၄)Cellophane ခေါက်ဆွဲ။ ခေါက်ဆွဲရဲ့ ပုံသဏ္ဍာန်က ကြာဇံလို ပိန်သေးသေးလေးဖြစ်ပြီး၊ အလင်းရောင်ဖောက်မြင်ရပါတယ်။ ရှေးယခင်ကတော့ ပဲတီးစိမ်းအနှစ်မှ ပြုလုပ်လေ့ရှိပြီး၊ ယခုနောက်ပိုင်းမှာတော့ မျောက်ဥ၊ အာလူး၊ ပလောပီနံ စတဲ့ကော်မှုန့် တို့မှ ပြုလုပ်လာကြပါတယ်။ ဒီခေါက်ဆွဲကို ဟော့ပေါ့၊ ခေါက်ဆွဲစွပ်ပြုတ်၊ ခေါက်ဆွဲကြော် စသည်ဖြင့် အမျိုးမျိုး လုပ်စားနိုင်ပါတယ်။ တရုပ်ပြည်သာမက၊ ဂျပန်၊ ကိုရီးယား၊ ဗီယက်နမ် စတဲ့ အရှေ့ တောင်အာရှနိုင်ငံများမှာ တွင်ကျယ်စွာ စားနေကြတဲ့ ခေါက်ဆွဲပါ။
(၅)ခေါက်ဆွဲအေး (ခေါ်) Cold noodle ခေါက်ဆွဲအေးစားသုံးမှု ကို တရုပ်ပြည်မှာ အုပ်စိုးခဲ့တဲ့ တစ်ဦးတည်းသော နန်းဆက် ဘုရင်မ Wu Zetian က စတင်ဖန်တီးခဲ့တာလို့ ဆိုပါတယ်။ သူမရဲ့ အသက် ၁၄ နှစ်မြောက်မွေးနေ့ မှာ၊ ကြင်ယာတော် ဖြစ်သူ နှင့်အတူ ထူးထူးခြားခြား စားရန်အတွက် သူမ ကိုယ်တိုင် စားဖိုမှူး ကို ခေါက်ဆွဲအေး စီမံခိုင်းတာပါတဲ့။ ဒီခေါက်ဆွဲအေးကိုတော့ La Mian ခေါက်ဆွဲ နဲ့ ချက်ရတာပါ။ အနံ့ အရသာအတွက် နှမ်းဆီ နှင့် ပဲငန်ပြာရည် ကို အသုံးပြုထားပြီး၊ ကြက်သားဖြင့်သာ လုပ်လေ့ရှိကြပါတယ်။ ခေါက်ဆွဲအေးကို သွားရည်စာအဖြစ်သာ စားလေ့ရှိပြီး၊ တရုပ်ပြည်မှာတော့ Ji Si Liang Mian လို့ခေါ်ကာ၊ အခြားနိုင်ငံတွေမှာတော့ “sesame noodles with chicken” လို့ ခေါ်ကြပါတယ်။
(၆)Dan Dan ခေါက်ဆွဲ။ တရုပ်ပြည် စီချွမ်း ပြည်နယ်မှာ ၁၈၄၁ လောက် က စတင်ခေတ်စား လာတဲ့ ခေါက်ဆွဲပါ။ ထိုကာလ တွင်တရုပ်ပြည်မှာ စားဝတ်နေရေးအတွက်တော်တော်လေး လုံးပ န်းကြရတဲ့အတွက် ခေါက်ဆွဲကို လူသွားလမ်းဘေးရှိ် ၀ါးပေါ် မှာခင်းရောင်းကြရခြင်းဖြစ် ပါ တ ယ်။ ၀ါးကို အစွဲပြုပြီး တရုပ်လို Dan Dan လို့အမည်တွင်ခဲ့တာပါ။ ရေဆူဆူထဲ မှာ ခေါက်ဆွဲ အစို နှင့် အတူ ငရုပ်ဆီ၊ ပဲငပိ တို့ ကိုပါတခါတည်းထဲ့ပြုတ်လေ့ရှိပြီး၊ တရုပ်ငရုပ်ကောင်း နှင့် ဟင်း သီးဟင်းရွက်ခတ်ထားတဲ့ ပူပူစပ်စပ် အရသာ သက်သက်လွတ်ခေါက်ဆွဲပြုတ်လေးပါ။ အဲဒီ အချိန် တုန်းကတော့ လမ်းဘေးအစားအစာမို့ လူကုံတန်တွေ စားလေ့မရှိကြ ပါဘူးတဲ့။ ယခု အခါ မှာတော့ တရုပ်ပြည်ရှိ လူကုံတန် အသိုင်းအ၀ိုင်းများသာမက၊ တစ်ကမ္ဘာလုံးရှိ တရုပ် စားေ သာက် ဆိုင်ကြီးတွေ မှာပါ Dan Dan Noodle မီနူးက ပေါ်ပြူလာဖြစ်လို့ နေပါပြီ။ ဒီ ခေါက်ဆွဲ ကိုတော့ ကြက်သားကို မသုံးဘဲ၊ အမဲသား (သို့ မဟုတ်) ၀က်သားဖြင့်သာ ပြုလုပ်ေ လ့ရှိကြ ပါတယ်။
< ဂျပန်ခေါက်ဆွဲ >
အေဒီ ၅၀၀ ခန့် တွင် တရုပ်ဘုန်းတော်ကြီးများ သာသနာပြုရာမှစ၍ ဂျပန် နိုင်ငံတွင် ခေါက်ဆွဲကို ဆန်အစားထိုး ပင်တိုင်အစား အစာအဖြစ် စားသုံးလာခဲ့ကြပါတယ်။ ဆွေမျိုးပေါက်ဖော် တရုပ် တို့ ယုံကြည်မှုအတိုင်း ဂျပန်နိုင်ငံမှာလဲဘဲ၊ “သက်ရှည်ကျန်းမာ ဘေးဘယာကင်းဝေးသည်” ဟု သက်ဝင်ယုံကြည်မှုဖြင့် ခေါက်ဆွဲကို ဘာသာရေးပွဲများ၊ မွေးနေ့ ပွဲများနှင့် လက်ဘက်ရည်ပွဲတော် များတွင် မဖြစ်မနေစားသုံးကြပါတယ်။ ဒုတိယကမ္ဘာစစ်ရောက်တဲ့အခါမှာတေ့ာ၊ အစာရေဆြာ ပတ် လတ် မှု ပြသနာကိုဖြေရှင်းရန် အတွက် တာရှည်ခံအောင် ခေါက်ဆွဲခြောက်ကို စတင်ဖန်တီးထုတ်လုပ်လာခဲ့ကြပါတယ်။
(၁)Soba ခေါက်ဆွဲ။ buckwheat (ခေါ်) ကောက်နှံစပါးသီးနှံတစ်မျိုးဖြင့်လုပ်ထားတဲ့ Soba ခေါ က်ဆွဲကို ၁၆၀၀ခုနှစ် အစောပိုင်း Edo မင်းဆက်မှာ စတင်စားသုံးခဲ့တာပါ။ buckwheat တစ်မျိုး ထဲ ဆိုရင် အစေးမကပ်တဲ့အတွက် ကော်ဓာတ်ရအောင် ဂျုံမှုန့် ပါ အနည်းငယ် ထဲ့နယ်ပေးရပါ တယ်။ ကောက်နှံနှင့်ဂျုံပါ ရောထားသောကြောင့် သီးနှံမှရတဲ့ သဘာဝ သီအာမင်ဓာတ် ပါရှိလို့ကျန်းမာရေးနဲ့ အထူးသင့်တော်ပါတယ်။ တိုကျိုမြို့ တော်အပြင်၊ ဂျပန်နိုင်ငံရဲ့ အရှေ့ ဘက် ကမ်း ရိုးတန်းတလျှောက် ကန်တို မြို့ တို့မှာ ပေါ်ပြူလာဖြစ်လို့နေပြီး၊ နံက်စောစောစာ နှင့် ဘာသာေ ရးပွဲတော်များအတွက် မရှိမဖြစ်တဲ့ ခေါက်ဆွဲလေးပါဘဲ။ ခေါက်ဆွဲ အသားက အင်မတန် နူး ညံ့ပျော့ပျောင်းလို့သယ်ယူဘို့ အဆင်မပြေတဲ့အတွက် အခြားနိ်ုင်ငံတွေမှာတော့ ဂျပန်ရဲ့Soba ခေါက်ဆွဲ အခြောက်ကိုသာ မြင်တွေ့ ရမှာပါ။ ဒီခေါက်ဆွဲကို dashi အသားပြုတ်ရည် နှင့် ဟင်းသီးဟင်းရွက်ရောပြွမ်းသော ခေါက်ဆွဲစွပ်ပြုတ်အဖြစ် အပူရော အအေးပါ ၂-မျိုးစလုံး စားကြ ပါတယ်။ အရသာပိုပေါ်လွင်အောင် saue ဖြင့်တွဲဖက်စားလေ့ ရှိ ပါတယ်။
(၂)Somen ခေါက်ဆွဲ။ ဒီခေါက်ဆွဲကလည်း Edo မင်းဆက်လက်ထပ်မှာ ပေါ်ခဲ့တာပါဘဲ။ ဂျုံဖြင့် လုပ် ထားတဲ့အဖြူရောင် ခေါက်ဆွဲ မျှင်မျှင်လေးပါ။ အထူးသဖြင့် နွေရာသီမှာ စားလေ့ရှိတဲ့ သွားရ ည်စာ ခေါက်ဆွဲအေးဖြစ်ြပီး၊ နှစ်သက်ရာ အသားတစ်မျိုး ရောကာ၊ ရေခဲရေစိမ်ပြီး စားလေ့ရှိပါ တယ်။ အနံ့ အရသာအတွက် ဂျင်းဖြင့်လုပ်ထားတဲ့ sauce တစ်မျိုးနှင့် တွဲဖက်စားကြပါတယ်။
(၃)Udon ခေါက်ဆွဲ။ ၈၀၀ ရာစုနှစ်လောက်တွင် ဂျပန်ဘုန်းတော်ကြီးများ၊ တရုပ်ပြည်မှာ သာ သနာပြုပြန်လာပြီးနောက် တရုပ် ခေါက်ဆွဲကို ပြန်လည်ဆန်းသစ်ထားတဲ့ Udon ခေါက်ဆွဲ လို့ ဆို ပါတယ်။ ခေါက်ဆွဲအသားမှာအတန်ငယ်ထူပြီး အဖြူရောင် အလုံး တုတ်တုတ်လေးမို့ စားရတာ အားပါးတရရှိလှပါတယ်။ ပေါင်မုန့် လုပ်တဲ့ဂျုံမှုန့် ဖြင့်ပြုလုပ်ထားတဲ့ခေါက်ဆွဲ မို့ လို့ လဲ၊ အြ ခား ခေါက်ဆွဲအမျိုးအစားတွေထက် တာရှည်ခံပါတယ်။ အိုဆာကာမြို့အပါအ၀င်၊ ဂျပန်နိုင်ငံရဲ့အနောက်ဘက် ဒေသတွေမှာ တွင်ကျယ်စွာ စားကြပါတယ်။ ခေါက်ဆွဲခြောက်အဖြစ်လဲ ထုတ် လုပ်ကြပြီး၊ အပူရောအအေးပါ ၂-မျိုးစားနိုင်ပါတယ်။ ဒီခေါက်ဆွဲ ပြုတ်ကို ကြက်သားဖြင့်သာ ချက်ပြုတ်လေ့ရှိပြီး၊ shimeji (ခါ်) မှိုဖြူ၊ Miso (ခေါ်) ပဲငပိ၊ မုန်လာဥနီ၊ ပဲသီးတို့ ကိုအသုံးပြု ပါတယ်။ အနံ့ အရသာအတွက် scallions (ခေါ်) ကြက်သွန်နီ တစ်မျိုးကို ပါးပါးလှီးပြီး အပေါ်က ဖြူးစားလေ့ရှိပါတယ်။
(၄)Ramen ခေါက်ဆွဲ။ ၁၉ ရာစုနှစ် Meiji မင်းဆက်လက်ထပ် မှာ စတင်ခေတ်စားလာတဲ့ေ ခါက်ဆွဲပါ။ တရုပ်ရိုးရာ La Mian ခေါက်ဆွဲကို ပြန်လည်ဆန်းသစ်ကာ၊ Ramen ခေါက်ဆွဲ ဟု အမည်ပေးထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ ဂျပန်မှာတော့ ဒီခေါက်ဆွဲကို “တရုပ် ခေါက်ဆွဲ” (၀ါ) “Dragon Noodle” လို့အလွယ်ခေါ်ကြပါတယ်။ ကယ်လိုရီအပြည့်အ၀ပါရှိကာ၊ ဈေးနှုန်းလဲသက်သာပြီး၊ အစို/အခြောက် ၂ မျိုးစလုံး သုံးနိုင် တဲ့အတွက် ဒုတိယကမ္ဘာစစ်ကာလအတွင်း ဒီသေးသေးမျှင်မျှ င်ခပ်လုံးလုံးဂျုံခေါက်ဆွဲကိုဘဲ အားထားရခဲ့ကြရတာပါ။ ခေါက်ဆွဲ ကြော်/ခေါက်ဆွဲပြုတ်အဖြစ် စွယ်စုံသုံးနိုင်ပြီး၊ ဂျပန်နိုင်ငံရဲ့ ဟင်းလျာ အမျိုးမျိုးတို့ မှာ အသုံးပြုလေ့ရှိကြပါတယ်။ ယနေ့ ဂျပ န်သာမက၊ နိုင်ငံတကာရှိ ဂျပန်စားသောက်ဆိုင်များတွင် Shiitake Chicken Ramen မီနူး ကို ၀ယ်လိုအားကောင်းနေပါတယ်။ ကြက်ရင်ပုံသား၊ မြှစ်၊ shiittake မှိုမဲ၊ Kelp (ခေါ်) ရေမှော်ပြား အြေ ခာက်၊ ကြက်ဥ တိုြ့ဖင့် ချက်ပြုတ်ထားပြီး၊ scallions (ခေါ်) ကြက်သွန်နီ တစ်မျိုးကို ပါးပါး လှီးကာ သုံးဆောင်ကြပါတယ်။
(၅)Konnyaku ခေါက်ဆွဲ။ ဒီခေါက်ဆွဲကိုတော့ အာရှတိုက်မှာသာစားလေ့ရှိပြီး၊ အနောက်နိုင်ငံ များမှာတွေ့ ရခဲပါတယ်။ မျောက်ဥပင်မျိုးနွယ်ဝင် konnyaku ပင်ရဲ့ အမြစ်မှ လုပ်ထားတဲ့ေ ခါက် ဆွဲဖြစ်လို့ ၊ ကယ်လိုရီ ၀%၊ ရေဓာတ် ၉၇% နဲ့အမျှင်ဓာတ် ၃% ပါရှိတဲ့အတွက်ကြောင့် ခန္ဓာ ကိုယ် အလေးချိန်လျော့လိုသူများ အတွက်အထူးသင့်တော်တဲ့ခေါက်ဆွဲလေးပါဘဲ။ konnyaku ပင်အမြစ်ကိုပြုတ်ပြီး၊ ချေကာ သစ်သားစည်ထဲလောင်းထဲ့ပြီး၊ ထောင့်မှန်စတုဂံပုံ မီးခိုရောင်ေ ခါက်ဆွဲတုံးလေးပါ။ အအေးခံ လိုက်တဲ့အခါမှာတေ့ာ အလွန်နူးညံ့စေးကပ်သွားပါတယ်။ ဒီခေါက် ဆွဲရဲ့့မူလသဘာဝက မည်သည့်ရနံ့ မျှ မရှိသော်လဲ၊ အနံ့ အရ သာတို့ ထဲ့လိုက်တဲ့အခါမှာတေ့ာ အရသာထူးလှပါတယ်။ တို့ ဟူး၊ dashi ၊ mange (ခေါ်) အခေါက်တု၊ ကန်စွန်းဥ၊ ကြာရိုး၊ မုန်လာ ဥနီ ၊ စာကေးအရက်အနဲငယ်တို့ ဖြင့် ချက်ပြုတ်ထားသော Buddhist Soup လို့ အမည်ရတဲ့သက် သက်လွတ်ခေါက်ဆွဲ ဟင်းလျာ ကို ဂျပန်နိုင်ငံရဲ့ဘာသာရေးနေ့ တွေမှာ အထွတ်အမြတ် စားလေ့ရှိပါတယ်။
(၆) Shirataki ခေါက်ဆွဲ။ : konnyaku ခေါက်ဆွဲကို အဖြူရောင်အဖြစ်ပြုပြင်ပြောင်းလဲလိုက်တဲ့ အခါမှာတော့ shirataki ခေါက်ဆွဲ ဖြစ်လာပါတယ်။ အလင်းရောင်ဖော က် ခေါက်ဆွဲဖြစ် ကာ ခေါက် ဆွဲအသားမှာထူပြီး၊ ရာဘာလိုပျော့အိအိ ဖြစ်ပါတယ်။ အစို/ အခြောက် ၂ မျိုးလုံးရနိုင်ပြီး၊ အသုပ်၊ ဟင်းချို စတဲ့ ဂျပန်ဟင်းလျာအမျိုးမျိုးးတို့ မှာ အသုံးပြုလေ့ရှိပါတယ်။
( ဆက်လက်၍ အပိုင်း-၂ တွင် ဖတ်ရှုပေးကြပါရန်။ ကျေးဇူးတင်ပါသည် )